Fitantanam-pitondrana · Jolay, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Jolay, 2011
Iran: Fanentanana ho Fanafahana Ireo Amerikana Mpihanika An-Tongotra Sisa Voatàna Am-ponja
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Jolay 2011
Sarah Shourd dia nandany 410 andro natoka-monina tany Tehran, Iran, talohan'ny nanomezana alàlana azy ho afaka miverina any Etazonia tamin'ny Septambra 2010. Miantso izao tontolo izao izy mba hiresaka mikasika ireo namany roa, Shane Bauer sy Josh Fattal, izay mbola any am-ponja ao Iran noho ny fiampangana ho nanao "asam-pitsikilovana" hatramin'ny fotoana nahasamborana azy telo niaraka fony nihanika an-tongotra ny tendrombohitra nanakaiky ny sisintanin'i Iran tamin'ny Jolay 2009.
Bahrain: Manomboka ny Fifanakalozan-kevitra nasionaly ny fitondrana sy ny mpanohitra
Hatramin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 14 Febroary 2011 tany Bahrain, toa noresahina tsindraindray ihany ny hevitra hoe hosokafana ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitantana. Tamin'ny Sabosty 2 Jolay, farany dia nanomboka ihany ilay fifanakalozan-kevitra nandrasana hatry ny ela ka nandray anjara tamin'izany ny vondrona laika Waad sy ny vondrona Wefaq Shia.
Murdoch Nipao-tsatroka An'i Singapore Ho Modely Nefa Mandà Izany Ireo Mponin'ny Aterineto Ao An-toerana
Azia Atsinanana 30 Jolay 2011
Ny filazam-baovaon'i Rupert Murdoch dia niteny nanoloana ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta fa fàka tàhaka i Singapore amin'ny fandoavana karama be ho an'ireo mpanao politika ao aminy mba hampihenana ny kolikoly ka tokony halain-tahaka . Ato no hita ny fanehoan-kevitr'ireo mponina ao Singapore.
Amerika Latina 27 Jolay 2011
Ny Filoham-pirenen'i Panamà, Ricardo Martinelli, dia nahatezitra sy niteraka resabe tao amin'ny Twitter, taorian'ny niheverana azy ho nanevateva mpampiasa iray nanakiana azy tamin'ny teny mahery. Nandà mafy ho tsy nihevitra haniratsira izany anefa ny filoha. Miresaka momba ilay hatezerana ireo mponin'ny aterineto.
Malezia: Maniry Ny Fialàn'ny Praiminisitra Ireo Mpampiasa Facebook
Azia Atsinanana 27 Jolay 2011
Nahavondrona mpanohana efa ho 200,000 tao Malayzia sahady ny pejy Facebook Olona 100,000 mangataka ny Fialàn'i Najib Tun Razak andro vitsivitsy taorian'ny niforonany. Tamin'io andro io ihany no nitakiana ny fialàn'ny Praiminisitra rehefa nidina an-dalam-be ireo olona an'arivony nandritra ny famoriam-bahoaka Bersih 2.0, famoriam-bahoaka mpomba ny demôkrasia izay noravàn'ny pôlisy tamin-kerisetra.
Afrika Mainty 26 Jolay 2011
Nahazo firenena vaovao i Afrika : Ny repoblikan'i Sodàna Atsimo. Nanao fitsapan-kevibahoaka i Sodàna Atsimo ny 9 Janoary 2011; amin'ny hoe hijanona ho faritr'i Sodàna ve izy sa tsia. Taorian'ny fifidianana saika lanin'ny besinimaro (99%) ho an'ny fahaleovantena hiala amin'ny avaratra, dia nambara tamin'ny 9 Jolay 2011 ny fahaleovantena ofisialin'i Sodana Atsimo. Miresaka mikasika ity vanim-potoana manan-tantara ity ireo mpitoraka bilaogy.
Korea Atsimo: Misedra Fanakianana Mahery Vaika ny Fiara Natokana Ho An'ny Vehivavy Any Anaty Metro
Azia Atsinanana 23 Jolay 2011
Satria mitombo be ny herisetra ara-nofo any anaty metro, indrindra mandritra ny ora maha betsaka ny mpandeha sy rehefa alim-be, nanapa-kevira ny governemanta ao Seoul hametraka fiaran-dalamby natokana fotsiny ho an'ny andriambavilanitra mba hampiatoana ny fiakaran'io taha io. Na izany aza, niteraka fanehoan-kevitra nafampàna tokoa teo anivon'ny Koreana Tatsimo mpampiasa aterineto ilay fihetsika.
Iran: Fahavaratra Mafana Mitarika Amin'ny Famaizana Fitafy “Tsy Mendrika”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Jolay 2011
Amin'ny toerana maromaro, midika masoandro, ranomasina, ary fotoam-pialatsasatra ny fahavaratra. Ao Iran, midika zavatra iray ny fahavaratra farafahakeliny: famaizana izay manao fitafy tsy mendrika na “tsy-Islamika”. Tamin'ity taona ity, nanampy amin'ny fampanajana ny fomba fitafy ny polisim-pifamoivozana ao Iran, ary tsy noferana amin'ny fanomezana fampitandremana sy sazy fotsiny ihany ny famaizana....
Eoropa Afovoany & Atsinanana 21 Jolay 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Jolay 2011